२०७६ चैत २६ गते २३:४१
काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल आयल निगमले आइतबारदेखि भरी ग्यास सिलिण्डर बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले १४.२ किलो (पूरै भरी) को सिलिण्डर ग्यास बिक्रीवितरण खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अुनसार बिहीबारदेखि नै उद्योगीलाई...
कति छ आजको बजार भाउ
२०७६ चैत २५ गते १०:२१
काठमाडाैं,२५ चैत्र । सुनकाे भाउ शुक्रबार ताेलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको भाउ तोलाको ७६ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै चाँदी आज तोलामा २० रुपैयाँ बढेर ताेलाको सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ...
२०७६ चैत २१ गते ९:३६
काठमाडाैं,२१ चैत्र । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएपछि मूल्य घटेको हो। साविकको विक्री मूल्यमा पट्रोल, डिजल र मटितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटेको हो। निगमले डिजेल तथा मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर ८५ र पेट्रोलको...
२०७६ चैत २० गते १३:३५
काठमाडाैं,२० चैत्र । कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य घटेको छ तर खुद्रा बजारमा भने तरकारीको भाउ छोइनसक्नु छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो साताको तुलनामा यो साता तरकारीको भाउ ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ । समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बजारमा तरकारी...
२०७६ चैत १४ गते १९:४१
काठमाडाैं,१४ चैत्र । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । नोभेल कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । हाल इन्डक्सन चुलोको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि...
ओरालो लागेको सुनको मूल्य शुक्रबार झनै बढ्यो !! कति छ आजको बजार भाउ
२०७६ चैत ९ गते १०:४१
काठमाडाैं,९ चैत्र । सुनकाे भाउ शुक्रबार ताेलामा पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ७५ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । बिहीबार १५ सय रुपैयाँ घटेर सुन तोलाको ७५ हजार...
निरन्तर घट्ने क्रममा सुन चाँदी मूल्य आज कतिमा झर्यो त ?
२०७६ चैत ८ गते १२:२५
काठमाडाैं,८ चैत्र । शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ । बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार सुनको मूल्य पाँचसय रुपैयाँ कम भएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ७५ हजार पाँच सय रूपैयाँ कायम भएको छ। बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला ७५ हजार रूपैयाँमा...
२०७६ चैत ६ गते १५:५८
काठमाडाैं,६ चैत्र । बजारमा आज पनि सुनको मुल्य घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज (बिहिबार )सुनको मूल्य हिजोको भन्दा तोलामा १ हजार ५ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार भइरहेको छ । महासंघका अनुसार आज बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य ७५...
« अघिल्ला 1 …4567 8 … 15 पछिल्ला »